Eye Care – Page7– Healthy Life Journal
မွေးရာပါ မျက်လုံးအားနည်းလို့ပါ . . .
မေး ။ ကျွန်တော်က မွေးရာပါ မျက်လုံးအားနည်းပါတယ်။ အလင်းရောင်များလွန်းတာ၊ အပူဒဏ်ပြင်းတဲ့ အခါမျိုးတွေမှာ တစ်ခါတလေ မျက်လုံးတောင်ဖွင့်ဖို့ ခက်ခဲတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ မျက်စိအားကောင်းအောင် မျက်စိအားဆေးကို ပုံမှန်သောက်ပါတယ်။ ရေရှည်မှာမျက်လုံးကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုဂရုစိုက်သင့်တယ်ဆိုတာ သိချင်ပါတယ်ဆရာ။ ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း(မျက်စိအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ...
မျက်စဉ်းဆေးခတ်မယ်ဆိုရင် . .
မေး ။ မျက်စဉ်းဆေးခတ်မယ်ဆိုရင် ဘာတွေကို သတိပြုသင့်ပါသလဲ။ ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း(မျက်စိအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါသည် ။ ဖြေ ။ မျက်စဉ်းဆေးအများစုဟာ ဆရာဝန်ရဲ့ ညွှန်ကြားချက်ရှိမှ ထည့်သင့်ပါတယ်။ ဆရာဝန်မညွှန်ကြားဘဲ မသုံးသင့်ပါဘူး။ အကြမ်းဖျဉ်းပြောရရင် မျက်စဉ်းဆေးတွေဟာ Antibiotic Eye...
ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး ရန်ကုန် မျက်စိဆေးရုံကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး. ကလေးတွေမှာ မျက်မှန်တပ်ဖို့လိုတာက ဘာကြောင့်ပါလဲ ဆရာ။ ဖြေ. ကလေးတွေမှာ မျက်မှန်တပ်ဖို့လိုအပ်တာက မျက်စိမှုန်တာကြောင့်ပါပဲ။ လူတွေထင်နေကြသလို ကလေးတွေမှာ ရောဂါတစ်ခုခုကြောင့် မျက်မှန်တပ်ရတာမျိုး လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ အရင်ဆုံး...
လက်သီးထိုးခြင်း၊ ဘောလုံးမှန်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည့် မျက်စိထိခိုက်ဒဏ်ရာ (Blunt Trauma)
ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး ရန်ကုန်မျက်စိဆေးရုံကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး. မျက်စိကို လက်သီးနဲ့ ထိုးမိတဲ့အခါ၊ ဘောလုံးမှန် တဲ့အခါ ဘယ်လိုဖြစ်တတ်ပါသလဲ ဆရာ။ ဖြေ. မျက်လုံးအိမ် (Eye Ball)က အပိတ်စနစ် (Close System) ဖြစ်ပါတယ်။...
ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး ရန်ကုန် မျက်စိဆေးရုံကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး. မျက်ရည်ကျရတဲ့အကြောင်းကို သိပါရစေ ဆရာ။ ဖြေ. မျက်ရည်က Lacrimal Glands ကနေ ထွက်ပါတယ်။ အဲဒီဂလင်းက မျက်လုံးအိမ်အကာ (Orbit) ရဲ့ Upper...
ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး ရန်ကုန် မျက်စိဆေးရုံကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး. မျက်စိကိုက်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကို သိပါရစေ ဆရာ။ ဖြေ. မျက်စိကိုက်တာက အကြောင်းအမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ ဒီပြဿနာဟာ ဆရာတို့မျက်စိအထူးကု ဆရာဝန်တွေ နေ့တိုင်းကြုံတွေ့နေရတဲ့ ပြဿနာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ မျက်စိကိုက်တာက...
ရာသီအလိုက် ဖြစ်တတ်တဲ့ မျက်စိရောဂါရှိသလား
ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး ရန်ကုန် မျက်စိဆေးရုံကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး ။ ရာသီအလိုက် ဖြစ်တတ်တဲ့ မျက်စိရောဂါတွေ ရှိပါသလား ဆရာ။ ဖြေ ။ မြန်မာနိုင်ငံအရတော့ ရာသီဥတုအလိုက်ဖြစ်တဲ့ မျက်စိရောဂါ (Seasonal eye disorder)...
အတွင်းတိမ်ခွဲစိတ်ရင် ရာနှုန်းပြည့်အောင် မြင်နိုင်သလား . . .
မေး ။ ကျွန်တော်မျက်စိမှာ အတွင်းတိမ်ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒါ ခွဲရမှာ စိုးရိမ်လို့ပါ။ အတွင်းတိမ်ခွဲ စိတ်ရင် ရာနှုန်းပြည့်အောင်မြင်မှု ရရှိနိုင်ပါသလား။ ဦးထွေး၊ မြောင်းမြ။ ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ ။ အသက်ကြီးတာကြောင့်...
ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး ရန်ကုန် မျက်စိဆေးရုံကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး ။ သွေးတိုးရောဂါရှိတဲ့သူတွေ မျက်စိမှုန်ပြီဆိုရင် ဘယ်လိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးပေးရလေ့ရှိပါသလဲ ဆရာ။ ဖြေ ။ သွေးတိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ မျက်စိရောဂါသည် လူနာတွေကို ဆရာတို့မျက်စိဆေးရုံမှာ မကြာခဏတွေ့ရပါတယ်။ ဒါကို လူနာတော်တော်များများက...